How do you know if you’re worrying too much: Wazi njani ukuba uxhalaba kakhulu? – Messages for Mothers
Wonke ubani ubanexhala ngeli xesha linzima le- COVID-19. Oku yindlela eqhelekileyo yokuvakalelwa kwimeko engaqhelekanga kakhulu kodwa, kwabanye abantu ixhala, uxinzelelo kunye nolonwabo zingaba ngaphaya. Ungazibona njani ukuba uxhalaba kakhulu?
Unexhala kakhulu ukuba ungafumana i- COVID-19 (nokuba wenza izinto ezikugcina ukhuselekile njengokuhlala ngaphakathi, ukugcina umgama kunye nokuhlamba izandla rhoqo)
Awukwazi kulala kuba ungakwazi ukuyeka ukuxhalaba
Ufunda imiyalezo yamakhasi onxibelelwano okanye umamela iindaba ezimalunga ne-COVID-19 lonke ixesha.
Awukwazi ukuphumla okanye ukuyeka ukuxhalaba
Usoloko usoyika ukuba kukho into embi eza kwenzeka.
Uyadikwa ngabanye ngaphandle kwesizathu
Awukwazi kumelana nezinto eziqhelekileyo ekumele uzenze endlwini njengokuhlamba, ukupheka nokucoca
Uva intamo iqinile luxinzelelo, amagxa okanye umqolo okanye isisu siphazamisekile ngenxa yokusoloko unexhala
Ukuba uva uxhalabe kakhulu, nceda uthethe nomntu.
I-South African Depression and Anxiety Group (SADAG) – ineminxeba emininzi 0800 21 22 23 okanye 0800 456 789 okanye 0800 20 5026 kunye neminye
Umnxeba woBomi ngokubanzi 0861 322 322 kunye nomxeba wabo woNcedo lukaGawulayo 0800 012 322
I-SANCA yotywala Alcohol kunye ne-WhatsApp yeengxaki zeZiyobisi 076 535 1701
Umnxeba wencedo lwaBantwana 0800 055 555
← How should I deal with suicidal thoughts during COVID-19: Ngaba ndingamelana njani neengcinga zokuzibulala neziphazamisayo ngexesha le- COVID-19? → How do I deal with changes in how services work: Ndijongana njani notshintsho lokuba iinkqubo zisebenza njani?